See gas na ụgbọ ala ndị a maka gam akporo | Gam akporosis
See gas na ụgbọ ala ndị a maka gam akporo
Jose Alfocea | | Egwuregwu gam akporo
Achọpụtala m na akwa a, ma ị nọrọ n'ụlọ ma ọ bụ nwee obi ụtọ ịme njem, ị nwekwara oge dị mma na ekwentị gị ma ọ bụ mbadamba, site na ịnwale ngwa ị na-amaghị, ma ọ bụ site n'inye ya okpete na na-egwu egwuregwu zuru oke nke ọnụ gị dị ka ndị m wetaara gị na post a: egwuregwu ụgbọ ala.
Ọ bụrụ n’ịlele forlọ Ahịa Play maka gam akporo ị ga - ahụ ọtụtụ egwuregwu egwuregwu ụgbọ ala na ọtụtụ mgbe. Ha na-abịa a ọtụtụ nke ekwekọghị na ụdị, ụfọdụ bụ ndị simulators, ụfọdụ na-agba ọsọ egwuregwu, na e nwekwara puzzle dabeere na egwuregwu. Egwuregwu ịgba ọsọ egwuregwu, ọ bụghị mgbe niile kama ọ na-abụkarị, nwere ụfọdụ eserese kachasị mma ma e jiri ya tụnyere egwuregwu egwuregwu mkpanaka ndị ọzọ. N'ọnọdụ ọ bụla, ebe enwere ọtụtụ ebe, taa m na-ewetara gị nhọrọ nke nwere ike ịbụ ụfọdụ n'ime egwuregwu kacha mma maka gam akporo. Lelee anya n'ihi na ejiri m n'aka na ị ga-ahụ nke ịchọrọ ịga n'ihu na-anụ ụtọ akwa a.
1 Ọrụ ụgbọ ala Job: Simulator
2 Grand Prix Akụkọ nke 2
3 Asphalt Xtreme: allygba Ọsọ
4 Mkpa maka Speed ​​No Limits
Ọrụ ụgbọ ala Job: Simulator
Y’oburu n’inwe obi uto banyere ugbo ala, kamakwa uwa nke ulo akwukwo, na “Car Mechanic Job: Simulator” igha achota ihe di oke nma n’ihi na obu egwuru-egwu di iche karie ihe ichoro iche mgbe i rutere na post a. N’egwuregwu a, ị gaghị agbachapụ anya n’ọsọ ụgbọ ala na-agba agba, mana ị ga-arara onwe gị nye Rụkwaa ụgbọ ala. Iji mee nke a, ị ga-ebu ụzọ chọpụta nsogbu ha nwere ma mgbe ahụ ị ga-edozi ya. Ọ bụghị egwuregwu dị mgbagwoju anya, agbanyeghị na ị nwere ihe karịrị 300 iberibe dị, ọtụtụ ụdị ụgbọ ala dị iche iche ị nwere ike ịnwale ọ bụkwa nnwere onwe ibudata.
Grand Prix Akụkọ nke 2
Ọzọkwa ihe dị iche iche karịa na mbụ na genre nke egwuregwu ụgbọ ala bụ Grand Prix Akụkọ nke 2, egwuregwu nke eserese ndị ahụ na-atọ ọchị ma ọ nwere ezigbo akụkọ na igwe. Dị ka onye ọkpụkpọ, ị ga-enwe otu ụgbọ ala nwe. Ga-ewu ụgbọ ala kachasị mma ka gị na ha nwee ike ịsọ mpi n'ọsọ na-akpali akpali. Obi nke egwuregwu ahụ dị na akụkụ nke ịme ụgbọala, agbụrụ ndị ahụ dị mfe, mana ọ na-atọ ụtọ. Ihe kachasị mma bụ na ọ bụ egwuregwu dị iche na ndị ọzọ, nke a na-enyekwa ya ikuku nke ọhụụ nke na-atọ ụtọ.
"Grand Prix Story 2" bụ egwuregwu nbudata n'efu mana ọ na-agụnye ịzụrụ ihe ntanetị ga-eme ka ahụmịhe egwuregwu gị kwalite.
Asphalt Xtreme: allygba Ọsọ
Ma ugbu a, anyị na-akwa n'ihi na-ekwu okwu banyere "Asphalt Xtreme: Rally Racing" bụ nnukwu okwu, otu n'ime egwuregwu kacha mma ụgbọ ala ị ga-ahụ. Mepụtara site na ụlọ ọrụ egwuregwu mara mma Gameloft, na-elekwasị anya na ịgba ọsọ ndị ọzọ ebe ị nwere ike imeghe otu dịgasị iche iche nke ụgbọala na ị nwere ike ịhazi dị ka ịchọrọ ma site na ụdị ndị ama ama dịka Jeep, Ford, Mercedes-Benz, Predator, Dodge, Chevrolet, na-agba ọsọ dịka ịchọrọ Oke ọsọ, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gabigara Ihe omume 300, Ihe ịma aka 1.100 y mode ọtụtụ online iji gbaa a wheel agafe obe, obodo, ugwu, glaciers na ụdị nile nke ndapụta gburugburu ụwa.
Dị ka nke gara aga, "Asphalt Xtreme: Rally Racing" bụ egwuregwu nbudata n'efu nke nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe na ntanetị.
Developer: gameloft Ghaat
Mkpa maka Speed ​​No Limits
Mkpa maka Speed ​​No Limits bụ ọhụrụ mobile egwuregwu na-ewu ewu ụgbọ ala ọduọ aha. Ọ bụ ezie na ọ dịghị mma dịka nsụgharị njikwa ya, ọ kachasị mma ma ọ bụrụ na ị na-achọ egwuregwu ịgba ọsọ ụgbọ ala maka ama gị. Ọ nwere ọtụtụ ụgbọ ala ụdị (BMW M4, Porsche 911, McLaren 650 na ọtụtụ ndị ọzọ) ị nwere ike ịhazi ọ masịrị gị n'ọmụmụ ihe gọọmentị, ma ọ bụ site na ịga ahịa ahịa. Ọ na-enye a dịgasị iche iche nke ọduọ ndapụta na ihe karịrị otu puku agbụrụ. Dị ka ndị gara aga, ọ bụ egwuregwu nbudata n'efu nke nwere mgbasa ozi na ịzụrụ ihe na ngwa ahụ.
Mkpa maka Speed: NL Las Carreras
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » See gas na ụgbọ ala ndị a maka gam akporo
Nokia nwere ihe ịga nke ọma n'afọ mbụ
5 gam akporo launchers iji nwaa izu ụka a